झापामा समुदायस्तरमा कोरोना देखिएपछि नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह सक्रिय - Jhapa Online
झापा, २५ साउन । झापामा समुदायस्तर (स्थानीय) मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएपछि यहाँका स्थानीय तह सोको नियन्त्रणका लागि सक्रिय भएका छन् ।
‘ट्राभल हिष्ट्री’ नभएकाहरु स्थानीयबासी ३६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नियन्त्रणका लागि यहाँका स्थानीय तह तीव्र गतिमा सक्रिय भएका हुन् । पछिल्लो समय जिल्लाको अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगर, कनकाई, भद्रपुर नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा ‘ट्राभल हिष्ट्री’ नभएकाहरुमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमित देखिएपछि सम्बन्धित वडा र स्थानीय तह नै शील गरिनुका साथै संक्रमितको कन्ट्याक टे«सिङ, स्वाब संकलन तथा पिसिआर परीक्षण तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । केही स्थानीय तहमा आंशिक एवम् केहीमा पूर्ण रुपमा बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको छ ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाको कोरोना नियन्त्रण तथा राहत व्यवस्थापन समितिले साउन २१ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मका लागि नगर क्षेत्रमा लाग्दै आएको हाट बजार बन्द गरेको छ । कनकाई नगरपालिकाले आजदेखि भदौ ५ गतेसम्मका लागि दैनिक हाट बजार बन्दको घोषणा गरेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा साउन १८ गतेदेखि २६ गतेसम्मका लागि बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको छ भने बिर्तामोड नगरपालिकाले साउन १८ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. ९, १० मा साउन २३ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. २ समेत बन्दाबन्दी गरिएको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण संयोजक ओम खड्काले नगर क्षेत्रमा कन्ट्याक टे«सिङको काम धामधम भइरहेको बताउनुभयो । क्वारेन्टाइनमा रहेका एक जना महिला प्रहरी, इलामबाट आएका एक जना सशस्त्र प्रहरी, एनएमबी बैंक बिर्तामोड शाखाका दुई जना कर्मचारी र एक जना औषधि व्यवसायीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनीहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको खोजी गरी स्वाब संकलन र पिसिआर परीक्षण धमाधम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बिर्तामोडमा दुई चरणमा ८४४ जनाको स्वाब संकलन सकिएको छ । “आज तेस्रो चरणको अन्तिम स्वाब संकलनको काम भइरहेको छ”, संयोजक खड्काले भन्नुभयो, “आजको समेत गरेर ११ सय जनाको स्वाब संकलन हुनेछ, कन्ट्याक टे«सिङमा कसैको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छैन ।”
पहिलो चरणमा ४८५ जनामध्ये १३३ जनाको, दोस्रो चरणमा ३८५ जनामध्ये १७४ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने बाँकीको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बिर्तामोड नगरपालिकामा हालसम्म २ हजार ६७ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये १० जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । ८ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने २ जना उपचाररत छन् । त्यस्तै, ७६३ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अर्जुनधारा वडा नं. १ मा एक जनाका कोरोना संक्रमण देखिएपछि नगर क्षेत्रमा कन्ट्याक टे«सिङको काम भइरहेको छ । समुदायस्तरमा कोरोना देखिएपछि तीन चरणमा ७१, १२७ र १७० जना गरी ३४५ जनाको स्वाब संकलन गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुकुन्द बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
“आज क्वारेन्टाइनमा रहेका दुई जनामा कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समुदायस्तरमा गरिएका पिसिआर परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।” आज फेला परेका दुई जना संक्रमितलाई उपचारका लागि पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हालसम्म अर्जुनधारा नगरपालिकामा समुदायस्तरमा १ गरी जम्मा २१ जनामा कोरोना देखिएको छ । संक्रमितमध्ये १४ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने बाँकीको उपचार भइरहेको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।
झापामा हालसम्म जिल्लामा ३९३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसमध्ये ३६ जना स्थानीयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका महामारी कार्यक्रम संयोजक जीवन चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । सोमध्ये ३४३ जना निको भएर घर फर्किसकेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा हालसम्म १२ हजार ८२६ जना को पिसिआर परीक्षण गरिएको छ ।